Manifestation | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
13 May 2011 : Rodoben’ny Vahoaka Malagasy : mila fahaizana mandrindra ny tolona (+vidéos)
Sary Villa Elisabeth
Mijoro… tsy matahotra
Ilaina ny fijoroan’ny tanora hanatevin-daharana ny Rodobe satria izy ireo no hoavin’ny Firenena. Tokony ho modely hoan’ny maintso volo ireo Filoham-pirenena telo mirahalahy mitarika ny vahoaka amin’izao tolona izao. Na efa mahazo taona aza izy ireo dia tsy mitsahatra mitady izay mahasoa ny Firenena. Alevina im-pito mandifitra olona ny tahotra rehefa hiady ho an’ny Firenena izany ary mila mijoro an-kasahiana ny rehetra. Ny tanjona dia ny hamongorana ny mpanongam-panjakana izay mibodo toerana eo amin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao.
Tsy hilatsaka any an-davaky ny bibidia
Tokony mandray am-pilaminana ny toromarika avy amin’ny mpandrindra ny vahoaka manaraka ny Rodobe. Mahalala zavatra maro mikasika ny velam-pandrika ataon’ny FATE izy ireo saingy misy ny zavatra tsy azo ambara ny be sy ny maro mba hialana indrindra amin’ny tendrim-po tsy mba namana. Sarotra ny mitarika sy miahy ny ain’ny vahoaka ary mitsinjo ny tsy ahafaty ny tolona. Raha sanatria manko tafalatsaka amin’ireny velam-pandrika ireny dia manome fiadiana ho an’ny FATE handringanany ny tolona avy hatrany.
Tsy maintsy ho tanterahina ny rodobenn’y Vahoaka Malagasy ho an’ny Tanindrazana na dia tsy tanteraka androany aza. Tsy tokony hipetraka ho hery famoretana hoan’ny vahoaka intsony ny EMMOREG satria hetsika politika no hatao fa tsy fanakorontanana na fandrobana sanatria. Ireo toerana saro-pady no tokony harovan’izy ireo ialana amin’ny asaratsin’ny zatra ny lalan-dririnina.
13 May 2011 : Hirodorodo ny avy any amin’ny Faritra (+vidéos)
Manomboka mihazo ny renivohitra ireo mpiray tanindrazana avy any amin’ny Faritra. Toamasina, Fianaranatsoa ary Toliara no efa nahatonga ny ampahany voalohany tamin’ny delegasionany. Fanamarihana ny fiaraha-mientana no tena antony nandraisan’izy ireo fitenenana teo amin’ny Villa Elisabeth androany. Efa mikaikaika avokoa ny vahoaka any amin’ny faritra amin’ny fijaliana ateraky ny fanonganam-panjakana tarihin’I TGV.
Tsy nitsahatra namahan-dalitra azy ireo ireto mpanongam-panjakana ireto ka tsy manaiky intsony izy ireo. Ny tolona hanafahana an’I Madagasikara dia tsy mijanona amin’ankolafy politika vitsy intsony fa efa raharahan’ny vahoaka Malagasy iray manontolo mihitsy satria tsy misy mandeha amin’ny laoniny na ny sosialy na ny toe-karena eto amintsika ankehitriny.
12/05/2011 : Tratrin’ny daka am-bava fo tamin’ny Amerikana ny Emmo-reg (+vidéo)
Afa-baraka fanindroany indray ny ekipan’ny Richard Ravalomanana. Zatra loatra ny lalan-dririnina amin’ny fanaovana jadona ka any amin’ny tompon’ny demokrasia no tsy nahay niaina. Raha nitoby teo anoloan’ny masoivoho Amerikana ireo kamio mihoatra ny folo, feno miaramila mirongo basy sy fitaovam-piadiana sahala any amin’ny tany miady, dia nivoaka avy anaty ambasady ireo mpiasa teratany malagasy roa, nitondra ny kadasitry ny masoivoho.
Niantsy ady ireo vahoaka manko ireo miaramaila sahala amin’ny fanaony ka dia tong hametraka ireo amin’ny toerana sahaza azy ireo mpiasan’ny tekinisian’ny masoivoho Amerikana. Noporofoin’ireto teknisiana ireto ary fa dia mbola tanin’ny masoivoho ihany koa ny toerana hitobian’ireto hery mpamoretana ireto, ka niangvaian’ireo teknisiana izy ireo mba hiala teo amin’ny faritra. Raha mikasika ny fiarovana ny masoivoho manko dia manana ny trai-kefa amin’izany ireo mpiandraikitra ny fiarovana ka tsy ilana miaramila hafa.
Ny 10 Marsa 2011, fotoana voalohany nanaterana taratasy tany an-toerana manko dia efa nanambara ny teo anivon’ny ambasady amerikana fa tsy ilaina akory ny fisian’ny Emmo Reg eny an-toerana, satria dia olona tsy tonga handroba ny vahoaka fa tonga haneho ny heviny.
12/05/2011 : Rodoben’ny Vahoaka Malagasy - Niteny ny demokrasia (+vidéos)
Tampina ny domin’ny hat. Nanamafy ny fanohanany ny hetsi-bahoaka mandala ny demokrasia ny amerikana. Raha ny fat izany aloha hatreto dia tsy afaka hanantena velively ny hahazo fankatoavana avy amin’ny Etazonia. Vahoaka maro no tonga nanatevin-daharana ny rodoben’ny vahoaka malagasy androany teny amin’ny tany malalaka, nanoloana ny masoivoho amerikana. Fahombiazana aloha iny hetsika voalohany iny. "Mission accomplie" hoy ny fiteny vahiny.
Tafita ny hafatra satria dia tafiditra soa aman-tsara tao amin’ny masoivoho ireo delegasiona nahitana an’i Ange Andrianarisoa, Manandafy Rakotonirina,Ihanta Randriamandranto, Miandrisoa Jean Marcel,Ruffin Tsiranana, ary Jean Bernard filohan’ny fikambanan’ireo fokontany 192. Roa ny anton-dia : dia ny hametraka taratasy fisaorana ho an’ny Ramatoa Hilary Clinton tamin’ny tatitra marina sy mazava izany nataony momba ny zon’olombelona eto Madagasikara, ny faharoa dia ny fangatahana ny fiaraha-miasa amin’ny Etazonia amin’ny fanatanterahana ny vinany dia ny hanatontosana ny fampihavanam-pirenena mialoha ny fifampiresahana. Ireo dia heverina ho tanterahina mialohan’ny 20 Mai, daty voatondro hanaovana ilay fihaonana an-tampon’ireo filoham-pirenena eo anivon’ny Sadc. Isan’ny noresahina ihany koa moa izany ny fiverenan’ireo mpitondra malagasy any ivelany satria dia tokony handray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena izy ireo. Ny Chargé d’affaires amerikana izay nandray ireo delegasiona moa dia nisaotra azy ireo ihany koa noho ny hetsika tsy misy herisetra ataony, ary dia namporisika hatrany azy ireo hanohy ny hetsika ho fitakiana ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara.
Niteny tokoa ny demokrasia ary ho tohizana eny amin'ny villa Elisabeth izany rahampitso Zoma 13 Mai.
Ambiansy teny Andranomena :
08/04/2011 : Masoivoho Maorisiana : latsa-dranomaso ny vahoaka (+vidéos)
Midika izao fa tsy mbola misy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara ao anatin’izao fahefana mpanongam-panjakana izao. Tsy misy ny fahatoniana na dia miziriziry hatrany hanohy ny lalany aza ny FATE. Dia mbola sahy miteny amin'ny mpanao gazety ilay zandary iray hoe :"tandremo sao dia miteny hoe nisy zavatra nipoaka teo fa tsy nisy izany an..."
Mitondra fanazavana mikasika ny zava-misy marina mikasika ity firenena ity ny mpanolotsaim-paritra avy any Ihorombe :
29/01/2011 : Tsy mivadika amin'ny Filoha RAVALOMANANA ny TIM Arivonimamo (+vidéo)
Nafana tanteraka ny fifampiarahabana tratry ny taona nataon’ny antoko Tiako I Madagasikara ao amin’ny distrikan’Arivonimamo. Tsy mbola nisitaka tamin’ny fitakian’ny vahoaka ireo mpikambana ao amin’ny Faritra Itasy. Fotoana nifanaovana dina ny fihaonana satria mbola lavitra ny dia ka mila mifampatoky ny herivelona rehetra ao amin’izany antoko naorin’ny Filoha RAVALOMANANA izany. Ny olom-boafidy ao amin’ity distrika ity ihany koa dia tsy nisy nanaraka ireo marivo salosana fa mitoetra tsara amin’ny fitakiana ny ara-dalàna.
Sary Arivonimamo androany
Ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA Marc dia nanantitra ny foto-kevitra tsy maintsy ijoroana mandritry ny fitakiana ny fiverenana amin'ny ara-dalàna. Tsy mbola misy ny afaka misandoka ho tompon'ny antoko TIM satria vao nametraka rafitra vaovao ny antoko ary midika izany fa velona tanteraka ary mandray ny toromarika avy amin'ny Filoha mpanorina
29/01/11 : Ny toky fitaka ... (+vidéos)
Nijoro manoloana ny vahoaka ny loholona avy amin’ny Faritra Itasy sy ny solombavam-bahoaka avy ao soavinandriana naneho fiaraha-mientana amin’ny depiote Rodin Rakotomanjato amin’ny fampandrosoana ny faritra na dia tapaka tanteraka aza ireo famatsiam-bola noho ny hasomparan’ny mpanongam-panjakana. Nahatonga solotena nanotrona ity hetsika ity ny mpitolona avy aty an-drenivohitra sy ireo koamina manodidina ary indrindra ny birao politikan’ny Tiako I Madagasikara. Nofaranana tamin’ny nofo-kena mitam-pihavanana sy ny firaha-mitotorebika ny lanonana teo amin’ny Kianja Tabaoka amoron’ny farihy Antabaoka.
SG Tiako i Madgasikara :
Député Rodin :
15/01/2011: “VRAI” TIM : tsy manoha-riana ny filoha mpanorina azy (+vidéos)
Isan’ny fampisehoan-kery fa indrindra entina hanaporofoana fa mbola anatin’ny heriny tanteraka ny antoko TIM na tsy eto aza ny filoha mitarika azy, ny teny Ambatomirahavavy androany. Tonga maro namaly ny antso maro ireo mpikambana ary nanao veliranon’Andriana ny tsy hamadika ny tolona. Manana laharam-pahamehana ny TIM amin’izao fotoana dia ny hamerenana ny filoha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana, na hinon-kidona na hinon-kihatra. Mahatsapa mantsy ireto mpikambana ireto fa dia “any amin’ny dada ny lakilen’ny krizy” ary dia ho tombotsoan’ny firenena Malagasy ny fiverenany.
Sary fifampiarahabana tratry ny taona
07/12/2010 - FIHAONAM-BEN'NY MPANDALA NY ARA-DALANA (+vidéo)
Ny toy izao no tena atahoran'ny FATE noho izany mihoatra izao ny fanamby mianrdy ny vahoaka rahampitso